Qatar Oo War Kasoo Saartay Weerar Ka Dhacay Muqdisho - Wararka Maanta
Muqdisho (Wararka Maanta) – Dowladda Qatar ayaa si weyn u cambaareysay weerar ismiidaamin ah oo shalay ka dhacay busteejo Gawaarida laga raaco oo ku taalo Magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya.
Bayaan Maanta kasoo baxay wasaaradda Arrimaha Debadda ee Qatar ayaa ku celisay mowqifkeeda ah inay si weyn u diidan tahay rabshadaha iyo falalka argagixisada iyadoo aan loo eegeyn ujeedooyinka iyo sababaha.
Wasaaradda waxay sidoo kale uga tacsiyeysay qoysaskii dadkii ku waxyeeloobay qaraxaas, dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed, iyadoo u rajeysay kuwa dhaawacmay caafimaad deg deg ah.
Qaraxaas oo uu fuliyey qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa wuxuu ka dhacay meel u dhow isgoyska Ex Control Afgooye, waxaana ka dhashay dhimashada 2 qof iyo dhaawaca tiro intaas ka badan.
Qaraxa ayaa wuxuu ka dhacay goob aad u mashquul badan oo ay ku ganacsadaan dad shacab ah, isla markaasna laga raaco gawaarida, lamana oga illaa hadda bartilmaameedka qaraxaas.
Weli ma jirto cid sheegatay mas’uuliyadda qaraxaas, inkastoo qaraxyada noocaan ah looga bartay inay fuliso kooxda Al-Shabaab ee dagaalka kula jirto Ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM.
Related Topics:dhacayFeaturedkasoomaantaMuqdishoQatarsaartaywarWararkaWararka Maantaweerar
Maxay ka dhigantahay guusha Barkhad Jaamac Batuun uu ka gaadhay…
Wararka Maanta : Xog: Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif oo Rooble la wadaagay arrin aysan ku...
Wararka Maanta : Koofur Afrika oo Dalkeeda Ka Eryeysa Diblomaasiyiinta Lesotho
Wararka Maanta : DEG DEG: Booliska oo gacanta ku dhigay eedeysanihii xaaskiisa ku dilay...
Wararka Maanta : Isbahaysiga mucaaradka Somaliland oo shaaciyay musharixiinta ay u xusheen...